बुवा-आमाको महत्व « MNTVONLINE.COM
एउटा छोरा आफ्नो वृद्ध बाबुलाई रात्रि भोजनको लागि एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा लिएर गयो।
खाना खाने बेलामा ती वृद्धको धेरै पटक खाना आफ्नो कपडामा पोखियो। रेस्टुरेन्टमा खाना खानको लागि बसेका सबै जनाले ती वृद्धलाई घृणित नजरले हेरिरहेका थिए। तर उनको छोरा भने एकदम सान्त थियो।
खाना खाइसकेपछी केहि शर्म नमानी वृद्ध बाबुलाई वाशरुम लिएर गयो। वृद्ध बाबुको कपडामा लागेको खाना सबै सफा गरिदियो अनुहार सफा गरिदियो कपाल कोरिदियो। र वृद्ध बाबुलाई चस्मा लगाइदियो र बाबुलाई बाहिर लिएर आयो सबै जना अचम्म मानेर हेर्दै थिए।
त्यसपछि उसले बिल भुक्तान गर्यो र वृद्ध बाबुलाई लिएर बाहिर आउदै थियो? त्यही रेस्टुरेन्टमा खाना खान बसेका एउटा वृद्धले उसलाई आवाज लगाए र उसलाई सोधे-बाबू तिमिलाइ लाग्दैन तिमी यहाँ केही छोडेर जादै छौ??
उसले जवाफ दियो-हैन सर् मैले केही पनि छोडेको छैन।
वृद्धले भने-बाबू तिमिले यहाँ प्रत्येक पुत्रको लागि एउटा शिक्षा सबक अनि प्रत्येक मातापिताको लागि उम्मीद छोडेर जादै छौ।
उसले जवाफ दियो-प्रायःजसो हामी बृद्धा आमाबाबुको साथमा बाहिर जानको लागि शर्म मान्छौ।
सङ्गै गएर के गर्छौ राम्रोसँग हिड्न पनि आउदैन। राम्रोसँग खान पनि जन्दैनौ तिमीहरु त घरमै बसेको सुहाउँछ भन्छौं।
तर तपाइँहरूलाई के थाहा जब तपाईंहरू सानो हुनुहुन्थ्यो तपाईंको मातापिताले तपाईंलाई आफ्नो काखमा लिएर बाहिर जानू हुन्थ्यो। तपाईं त्यति बेला ठिक सङ्ग हिड्न पनि सक्नु हुनि थिएन। ठिक सङ्ग खान पनि सक्नु हुनि थिएन। त्यो बेला तपाईंलाई आफ्नो मातापिताले आफ्नै हातले खाना खुवाउनु हुन्थ्यो। खाना पोखियो भने गाली हैन मायालु तरिकाले सम्झाउनु हुन्थ्यो।
अनि त्यही मातापिता बुढेसकालमा कसरी बोझ लाग्नु भयो?
मातापिता भगवानको रुप हुन। उनीहरुको सेवा गर्नुस्। माया दिनुहोस् किनकि एकदिन हजुरहरु पनि बृद्ध हुनुहुन्छ।
आफ्नो मातापिताको सधैं सम्मान गर्नुस्। गुरूनै आफ्नो मातापिता हुन।
– तामाङ माइलो
पप्पुले बनाएको तीनकुनेको बागमती पुल भत्काएर नयाँ बनाइने, डिजाइन हुँदै
लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल नयाँ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ । पुलको
डब्लूएनसीसी टी-20 क्रिकेट, वेष्टर्न नेप्लीज क्रिकेट क्लबलाई उपाधि !
गत आइतबार पर्थमा आयोजित ‘डल्बु एन सी सी टी २०’ क्रीकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा नेप्लिज